Genesisi 47 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jakobho anoonana naFarao (1-12)
Kutungamirira kwaJosefa neuchenjeri (13-26)
Israeri anogara muGosheni (27-31)
47 Saka Josefa akaenda akanoudza Farao kuti:+ “Baba vangu nehama dzangu vauya nemakwai avo nemombe dzavo nezvese zvavainazvo, vachibva kunyika yeKenani, uye vari munyika yeGosheni.”+ 2 Akatora vana vababa vake vashanu, akavasuma kuna Farao.+ 3 Farao akati kuvana vababa vaJosefa: “Munoita basa rei?” Vakamupindura kuti: “Varanda venyu vafudzi vemakwai, isu nemadzitateguru edu.”+ 4 Vakabva vati kuna Farao: “Tauya kuzogara munyika muno sevatorwa,+ nekuti hakuna mafuro ezvipfuwo zvevaranda venyu, nekuti nzara yacho ihuru munyika yeKenani.+ Saka varanda venyu vanokumbirawo kugara munyika yeGosheni.”+ 5 Farao akabva ati kuna Josefa: “Baba vako nehama dzako vauya kuno kwauri. 6 Nyika yeIjipiti iri mumaoko mako. Ita kuti baba vako nehama dzako vagare munzvimbo yakanakisisa yenyika ino.+ Ngavagare munyika yeGosheni, uye kana pakati pavo paine varume vaunoziva kuti vanogona basa, ita kuti vachengete zvipfuwo zvangu.” 7 Josefa akabva apinza baba vake Jakobho, akavasuma kuna Farao, uye Jakobho akakomborera Farao. 8 Farao akabvunza Jakobho kuti: “Mune makore mangani?” 9 Jakobho akati kuna Farao: “Ndine makore 130 uye ndiri mutorwa anongotenderera nenyika. Makore angu andararama mashoma uye akazara nematambudziko,+ uye haana kuwanda seemadzitateguru angu paaigara ari vatorwa.”+ 10 Pashure paizvozvo Jakobho akakomborera Farao, akabva pamberi pake. 11 Saka Josefa akapa baba vake nehama dzake pekugara munyika yeIjipiti, uye akavapa pakanakisisa penyika yeIjipiti, munyika yeRamesesi,+ sezvakanga zvataurwa naFarao. 12 Josefa akaramba achipa baba vake nevakoma vake nemunin’ina wake nemhuri yese yababa vake zvekudya,* maererano nekuwanda kwevana vavo. 13 Kwakanga kusina zvekudya* munyika yese, nekuti nzara yacho yakanga iri huru kwazvo, uye yakasiya nyika yeIjipiti nenyika yeKenani dzisisina chekubata.+ 14 Josefa aitora mari yese yaiva munyika yeIjipiti nenyika yeKenani yaiuya nevanhu vachitenga zviyo,+ uye Josefa akaramba achiiunza muimba yaFarao. 15 Nekufamba kwenguva mari yakapera munyika yeIjipiti nemunyika yeKenani, uye vaIjipiti vese vakatanga kuuya kuna Josefa, vachiti: “Tipei zvekudya! Tingafa here makatarisa nekuti hatisisina mari?” 16 Josefa akabva ati: “Kana musisina mari, unzai zvipfuwo zvenyu uye ndichakupai zvekudya tichichinjana nezvipfuwo zvenyu.” 17 Saka vakatanga kuuya nezvipfuwo zvavo kuna Josefa, uye Josefa airamba achivapa zvekudya ivo vachimupa mabhiza avo, makwai, mombe, nemadhongi, uye akaramba achivapa zvekudya achichinjanisa nezvipfuwo zvavo zvese mugore iroro. 18 Gore racho parakapera, vakatanga kuuya kwaari mugore rakatevera vachiti: “Hatingavanziri ishe wangu kuti mari nezvipfuwo zvakatopiwa ishe wangu kare. Hatisisina chekupa ishe wangu kunze kwemiviri yedu neminda yedu. 19 Tofa here makatarisa, isu nenyika yedu? Titengei isu nenyika yedu mutipe zvekudya, tichava varanda vaFarao uye nyika yedu ichava yake. Tipei mbeu kuti tirarame, torega kufa, uye kuti nyika yedu irege kuita dongo.” 20 Josefa akabva atengera Farao nyika yese yeIjipiti nekuti vaIjipiti vese vakatengesa minda yavo, nekuti vakanga varumwa nenzara; uye nyika yacho yakava yaFarao. 21 Akabva atamisa vanhu vese vemuIjipiti, kubva munzvimbo dzayo dzese, kuti vagare mumaguta.+ 22 Ivhu revapristi chete ndiro raasina kutenga,+ nekuti migove yevapristi yaibva kuna Farao uye vairarama nemigove yavaipiwa naFarao. Ndokusaka vasina kutengesa ivhu ravo. 23 Josefa akabva ati kuvanhu vacho: “Onai, nhasi ndakutengai imi nenyika yenyu kuti muve vaFarao. Heino mbeu, idyarei munyika yacho. 24 Kana yabereka, mupe Farao chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu,+ asi zvikamu zvina zvichava zvenyu zvekuzodyara mumunda uye zvekudya zvenyu nevaya vari mudzimba dzenyu nevana venyu.” 25 Saka vakati: “Matiponesa.+ Ngatinzwirwe nyasha nashe wangu, uye tichava varanda vaFarao.”+ 26 Josefa akabva auita murau, uchiri kushanda nanhasi munyika yeIjipiti, kuti Farao anowana chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu. Ivhu revapristi chete ndiro risina kupiwa Farao.+ 27 VaIsraeri vakaramba vachigara munyika yeIjipiti, muGosheni,+ vakagadzikana mairi, vakabereka, vakawanda zvikuru.+ 28 Jakobho akararama munyika yeIjipiti kwemakore 17, zvekuti mazuva eupenyu hwaJakobho akava makore 147.+ 29 Israeri akanga ava pedyo nekufa,+ saka akashevedza mwanakomana wake Josefa akati kwaari: “Kana wandinzwira nyasha, ndinokumbira kuti uise ruoko rwako pasi pechidya changu, uye unofanira kundiratidza rudo rusingachinji uye kuramba wakatendeka kwandiri. Ndapota, usandiviga muIjipiti.+ 30 Kana ndafa,* unofanira kunditakura, wobuda neni muIjipiti wonondiviga muguva remadzitateguru angu.”+ Iye akabva ati: “Ndichaita zvamataura.” 31 Akabva ati: “Ndipikire.” Saka akavapikira.+ Israeri akabva akotamisa musoro wake nechekumusoro kwemubhedha.+
^ ChiHeb., “ndarara nemadzitateguru angu.”